ब्रत बस्दा कमजोरी भएर चक्कर आयो भने के गर्ने ? « Himal Post | Online News Revolution
ब्रत बस्दा कमजोरी भएर चक्कर आयो भने के गर्ने ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १७ श्रावण १०:२४
खासगरी साउनमा ब्रत बस्ने, पूजा आरधाना गर्ने गरिन्छ । ब्रत बस्नुको अनेकौ फाइदा छन् । यसबाट धार्मिक लाभ मात्र होइन स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पुग्छ । यद्यपी पूजा-आजा, ब्रत-उपवासको क्रममा कतिलाई कमजोरी, थकान महसुष हुनसक्छ । कतिपयलाई चक्कर लाग्न सक्छ । यसबाट बच्न केहि उपाय गर्न सकिन्छ ।
– सबैभन्दा राम्रो काइदा हो भरपुर पानी पिउनुपर्छ । दिनभरमा केहि खाइएको छैन भने पनि पानी पर्याप्त पिउनुपर्छ, जसले शरीरलाई हाइड्रेट राख्छ । साथै अक्सिजनको मात्रा पनि कायम राख्छ । यसले शरीरमा उर्जाको कमी महसुष हुँदैन ।
– प्राणयाम पनि राम्रो विधी हो । प्राणायाम गर्न गाह्रो पनि छैन । केवल लामो गहिरो सास लिने र फ्याक्ने प्रक्रिया जारी राखे हुन्छ । अनुलोम विलोम गर्नुहोस् । यसले अक्सिजनको स्तर बढ्छ । त्यसैले चक्कर आउने संभावना हुँदैन ।
– चक्कर लाग्ने समस्या भए एक चम्चा सुख्खा धनिया चपाउनुहोस् र पानी पिउनुहोस् । यद्यपी यो विधी विहान खाली पेटमा गर्नुपर्छ ।
– जब तपाईलाई चक्कर लागेको महसुष हुन्छ, दहीको सेवन गर्नुहोस् । यसले गर्मीमा सितलता त दिन्छ नै, शरीरलाई उर्जा पनि ।
– रातभर पानीमा भिजाएर राखिएको बदाम बिहान खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्छ । यसले चक्कर लाग्नबाट बचाउँछ । साथै मस्तिष्कका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
– व्रत बस्दा विहान बेलुकी प्रणायाम गर्नु तथा मौन रहनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । त्यस्तै, शरीर तथा मस्तिष्कलाई पनि भरपूर मात्रामा आराम दिनु उचित हुन्छ ।